Semalt: I-Botnet yee-IoT Izixhobo ezixakekileyo zithumela i-DDoS enkulu kunazo zonke
Uhlaselo lwewebhu luxhomekeke kumanyathelo okhuseleko olwaneleyo. Kufuneka wenze iwebhusayithi yakho ikhuseleke kwezinye zezi zihlaselo eziqhelekileyo zeDDoS. Kwimiba nganye, iibhenets izisa umncedisi phantsi, ukwenza isayithi ihluleke ukuhambisa umsebenzi wayo oyintloko. Uthungelwano lweebhodnesi luyakwenza ukuhlaselwa kweDDoS enkulu kwaye zenze iinkampani ezininzi zingaphumeleli kwiimpendulo zabo zeeva - nordexx wsafe. Uhlaselo olukhulu lwebhokisi lwe-botnet luchukumise amacebo amaninzi aneziko eliqhelekileyo lokulawula ukwenza imisebenzi yabo emininzi. Kwiimeko ezininzi, abantu bajamelana nobugebengu njengoburhwebongela be-intanethi ngenxa yeemeko ezininzi ze-website. Ngokomzekelo, ukuhlaselwa kwe-Akamai kwenzeka xa kukho inkonzo ye-botnet ebhekiselele kwisizinda esisodwa.
Ukuhlaselwa kwe-IoT yeDooS kunomphumo ophezulu kunokuba u-Ellis. Nje ngo-2010, ukuhlaselwa kweDDoS kuninzi kwiiwebhusayithi ezifana neJoomla, eyabangela ukukhubazeka kwintsebenziswano yonke yenkampani. Ukusuka kulo hlaselo, abantu babe nezifundo ezibalulekileyo kwaye bafumanisa isizathu sokuba bafanele ba khusele amaseva abo. I-Nik Chaykovskiy, i-10 (Semalt ingcali, ithi kukho nezinye iindlela ezikwazi ukuphumelela ukwenza le nkqubo ivele. Kwiinkoliso ezininzi ze-e-commerce, ukhuseleko lwewebhusayithi lixhomekeke kwezinye zeendlela abazisebenzisayo ukugcina ugaxekile. Kwezinye iimeko, abahlaseli banokuphumelela kule miqathango basebenzise ukuhlaselwa okulula kweenkonzo.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando kunye neBots
I-SEO iquka ukusebenzisa i-bots ebalulekileyo. Iiwebhusayithi ezininzi zixhomekeke kwi-bots yokuthengisa ukuphucula amava abo kwiwebhusayithi. Nangona kunjalo, abasebenzisi banokwenza iinjongo ezinobungozi ngeenjongo zokugula..Uninzi lwezihlaselo ezinkulu zeDDoS zenzeka ngokusebenzisa ezinye zezi bots. Iwebhusayithi yakho kufuneka ikwazi ukwahlula phakathi kwezi hlaselo. Unokukhusela isikhundla esifanelekileyo kwi-SERP ngokukodwa xa isayithi ikhuselekile. Iiwebhusayithi ezingakhuselekanga okanye ezingenazo izicwangciso ze-SEO ezifanelekileyo zichaphazelekayo kwimicimbi echaphazelekayo. Ngaphezulu, iwebhusayithi ingahluleka kwi-SEO inxalenye xa kukho amanyathelo ambalwa okanye akukho nxamnye nokulwa nogaxekile.
Xa wenza intengiso ye-intanethi, kukho isidingo sokuhlalutya inkqubela yeeprojekthi zakho zokuthengisa. I-Webmasters ixhomekeke kumaqhinga afana ne-Google Analytics anokunqanda ugaxekile. Kwi-Google Analytics, unokuthi uvimbele i-Botnet yendlela kunye nezinye izilwanyana ezinobungozi. Kwakhona kunokwenzeka ukuba kuqashwe amanyathelo angenza ibhanti ye-intanethi yangaphakathi. Ungasebenzisa i-Google Analytics ukwenza ukuhanjiswa kwenkonzo yakho kwanele. Ngomlinganiselo ofanayo, zikho ezinye iindlela abagxeki abangayisebenzisa ukuhambisa iibhenets.
Uninzi lwamashishini ludinga iwebhusayithi ephumelelayo ukwenza imisebenzi yabo yemihla ngemihla. Kwiimeko ezininzi, iiwebhusayithi zisebenzisa iinkonzo ezinjengempendulo yomncedisi kunye neebhotile ukwenzela ukuba iziganeko zabo ziphumelele. Xa kwenzeka inkohliso ye-intanethi, umsebenzisi angaqalisa ukuhlaselwa kwe-botnet kwiwebhusayithi. Kule meko, isayithi lonke lingatyhahla kwaye liwe, elikhokelela ekuphazameni ngendlela le website isebenza ngayo. Kwiminyaka edlulileyo, ukuhlaselwa kwe-botnet njengoAkamai kunokubangela ukuba kube nemiphumo emibi emayelana nokusebenza kwewebhusayithi yakho. Unokukhusela isayithi lakho malunga nalezi zihlaselo phakathi kwezinye izinto ezininzi. Unokwenza utshintsho kwiindawo zakho zokuthengisa zewebhu kwiziko lakho.